कांग्रेसमा मौलाउँदो गुट : सक्रिय सदस्यमा पनि भागबन्डा – PraharDailyNews
Home/राजनिती/कांग्रेसमा मौलाउँदो गुट : सक्रिय सदस्यमा पनि भागबन्डा
प्रहार डेली न्यूज २०७७, ७ चैत्र शनिबार १४:१०
गत बुधबार दाङमा पत्रकारहरूले अब पार्टीमा रहने भूमिकाबारे सोध्दा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले जवाफ दिए, ‘कांग्रेसका सबै टिमसँग बसिरहेको छु ।’ उनले सो प्रसंगले कांग्रेसभित्रका जिल्लागत गुटलाई संकेत गर्छ । ‘दाङमै पनि कांग्रेसका चार÷पाँच थरी समूह छन्,’ उनले भनेका थिए, ‘सबैसँग बसिरहेको छु तर कुन समूहले मलाई सहयोग गर्छ भन्ने पनि मैले बुझेको छु ।’ कांग्रेसको आगामी सभापतिको दौडमा रहेका कोइरालाले केन्द्र स्तरमा मात्रै हैन, जिल्लाजिल्लामा कांग्रेसभित्र अनेकन् गुट रहेको नकार्न सकेनन् । फलतः उनले दाङकै चारपाँच गुटसँग बसेर सभापतिका लागि सहयोग माग गरेको पत्रकार सम्मेलनमै स्विकारे ।
लामो समयदेखि गुटउपगुटको सिकार बन्दै आएको कांग्रेसभित्र मूलतः केन्द्रीय नेतृत्वले नै गुट खडा गरेको आरोप लाग्ने गर्छ । केन्द्रीय नेताकै गुटगत राजनीतिका कारण कांग्रेसले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको भनेर जिल्ला तहबाट नेतृत्व पंक्तिमाथि लाग्ने आरोप एक अर्थमा सही होला । तर कांग्रेसको गुट शृंखलाको आरोप केन्द्रीय नेतृत्वमाथि लाग्ने भए पनि कांग्रेसभित्रको गुटगत राजनीति पार्टीको तल्लो तह वडास्तरबाटै व्यापक रूपमा सुरु भइसकेको हुन्छ । यो राजनीति वडा तहकै नेताहरूले सुरु गरिसकेका हुन्छन् ।
अहिले कांग्रेसको महाधिवेशनको चर्चा चलिरहेका बेला वडा तहमा कांग्रेसका नेताहरू बढी केन्द्रित भएका छन् । कारण हो, सक्रिय सदस्यता वितरण । फलतः गुटको शृंखला वडा तहमा सक्रिय सदस्यता वितरणदेखि नै प्रारम्भ हुने गरेको छ । नेताहरूले पार्टीले दिने सक्रिय सदस्यता संख्या बाँडफाँड गरेरै टुंग्याइरहेका छन् ।
कसले कति पाउने भनेर दामाशाही हिसाबमा उनीहरूले भागबन्डा गर्ने गरेका छन् । कतिपय वडामा यही भागबन्डा नमिल्दा सदस्यता संख्या टुंगो लाग्नै सकेको छैन । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा देवेन्द्र बस्नेतले लेखेका छन् । ratopati
प्रधानमन्त्रीले ज्यानको धम्की दिने ? भीम रावल
२०७७, २६ बैशाख शुक्रबार १५:११
२०७७, ६ आश्विन मंगलवार ११:३३
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पर्सा कार्यकर्ता भेला तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम सप्पन्न ।
रा.प्र.पा.बिरगंज वार्ड नं १७ अलौं वडा एकाई कमिटी द्वारा बिभिन एजेन्डा सहित ज्ञापन पत्र बुझाइयो।